कायापलट हुने जनअपेक्षा पुरा गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनीधिमा तालमेल जरुरी छ ! • Nepal's No. 1 Digital News Paper .
नेपाल अब अर्को युगमा प्रवेश गरेको उद्घोष गरिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाँऊ–गाँऊमा नै पुगेपछि अब नेपालीको जीवन स्तरमा नै कायापलट हुने जन–अपेक्षा छ । हुन पनि हो । संविधानतः नै जनताका लागि थुप्रै अधिकार विकेन्द्रिकृत गरिएको छ । पहिलेको स्थानीय निकाय भन्दा सर्वाधिकार युक्त स्थानिय तह बनेको छ । जहाँ निर्वाचनपछि अधिकार सम्पन्न जनताले रोजेका व्यक्ति पुगिसकेका छन् । के अब उनीहरुले जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सक्लान् ? भन्ने सबैको मनमा प्रश्न उब्जिएको छ । यता दुई सताब्दि सम्म कर्मचारीको हातमा रहेको अधिकार सजिलै जनप्रतिनिधिलाई सुम्पिन पनि सकिरहेका छैनन् । जसले कही–कतै कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच टकरावको स्थितीपनि आइरहेको छ । यो परिस्थितीमा अहिलेका स्थानिय तहमा कसरी काम भइरहेको छ भन्ने सबैको जिज्ञासा मेटाउन हामीले प्रतिनिधिको रुपमा पूर्वी जिल्ला धनकुटाको खाल्सा छिन्ताङ्ग सहिदभूमी गाऊँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत इन्दिरा न्यौपानेसँग कुराकानी गरेका छौ ।
तपाई निर्वाचन अगावै गाऊँपालिका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । अहिले त निर्वाचन जितेर जनप्रतिनिधि गाँऊपालिका प्रमुख भएर आउनुभएको छ नी के छ भिन्नता ?
उहाँहरुले संवैधानिक रुपमा नै निक्कै धेरै अधिकार लिएर आउनुभएको छ । जनताबाट चुनिएको व्यक्ति हो । हामीपनि राज्यको जिम्मेवारी पुरा गर्न राज्यले खटाएका व्यक्ति हौ । जनताको सेवा गर्ने हाम्रो र उहाँहरुको अभिलासा एउटै हो । त्यसैले हामीले सौहार्द रुपमा उहाँहरुलाई काम गर्ने वाताबरण बनाउनु नै हाम्रो दायीत्व पुरा गर्नु हो । मेरो गाँऊपालिकाको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ भने गाऊँपालिका प्रमुख र म कार्यकारी अधिकृतबीच निक्कै राम्रो तालमेल छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नदेखि उहाँहरुको सपथ ग्रहण, पदवहाली, र कार्यकक्षमा सहजताका लागि हामी एक अर्काको सह–अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढेका छौ ।
आफैले सपथ दिलाएर पदवहाली गरेका जनप्रतिनीधिको निर्देशन कर्मचारीलाई पच्न सकेन भनिन्छ नी ?
त्यस्तो हैन । संवैधानिक र कानूनी रुपमा नै अधिकार प्राप्त व्यक्तिलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । हाम्रा काम कर्तव्य र अधिकार एक अर्काका स्पष्ट छन् यसैलाई स्वीकार गरेर काम गर्नुपर्छ ।
निर्वाचन अगाडी र पछाडी के भिन्नता छ ?
हाम्रो गाँऊपालिकामा त त्यस्तो अवस्था छैन । तर मेरा साथी सहकर्मीहरुसँग सम्वाद हुँदा केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच तालमेल हुन नसकेको वास्तविक हो । कर्मचारीहरुलेपनि दुई दशकसम्म आफ्नै हातमा रहेको अधिकार सजिलै जनप्रतिनिधिलाई सुम्पिन नसकेको, जनप्रतिनीधिलेपनि पदमा पुग्नासाथ जाने–नजानेपनि अब कर्मचारी कोही हैनन् । सर्वैसर्वा हामी हौ भन्ने मनोभावना बोकेर पुग्नुभएका कारण त्यहाँ तालमेल हुन नसकेको देखिन्छ । मेरो विचारमा अब कायापलट हुन्छ भन्ने जनअपेक्षा पुरा गर्नका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनीधिबीच तालमेल हुन जरुरी छ । एक अर्काको सह–अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढ्ने हो भने हामी दुनियाँकै सफल बन्छौ ।
पहिले र अहिले जनताले चै के फरक पाउनुभयो ?
परिवर्तन जादुको छडी हैन । फुमन्तरबाट चटक देखाएजस्तो क्षणभरमा अर्कै देख्ने बनाउने । यसलाई निरन्तरको कार्यबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ । पहिले भन्दा अहिले जनताका लागि धेरै सहज भएको छ । दैनिक जीवनका घटनाक्रमको सहजीकरणका लागि आफुले जाने बुझेको जनप्रतिनिधिबाट काम गराउँदा धेरै सहज छ ।
जनप्रतिनीधिलेपनि आफ्ना गाँउका अधिकांश जस्तो जानेबुझेकै जनता भएकाले कुनै उल्झनवीना नै काम गर्न सक्नुभएको छ । विकास र जनजीविकाका थुप्रै कार्यक्रम अब गाँऊपालिकाबाट नै जाने भएकाले केन्द्रीय सरकारको आशमा बस्नै नपर्ने दिन आएको छ । साँच्चै भन्ने हो र काम गर्न सक्ने हो भने त कायापलट नै हुनेछ नी ।